Think Different » ငါလည်းမရှိတော့ဘူး….	7
kyeemite says: အင်း..စဉ်းစားစရာလေးပါဘဲ…အားပေးသွားပါတယ်.
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: ဟုတ်တယ်ဗျာ…..ယုံရခက်ကြီးနော်။တွေးစရာတွေ တပုံတပင်နဲ့ ပါလား!!!!!!!!
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 30
uzin says: သူလဲမသိ၊ ငါလဲမသိ၊ သူငါမသိတဲ့ကိစ္စ၊ အရှုပ်ဖွလို့ကြေညာ၊ တကယ်မဟုတ်တာတွေက အသေအချာ၊ ဓမ္မဂုဏ်ရည် ခြောက်ချက်နှင့် မညီညာ၊ ဒုတ်ထောက်လို့ဟော၊ ခွက်မှောက်လို့ပြော၊ ၂၁ရာစုမှာ ခေတ်မီလာ။ ပရိုချက်တာကို အသုံးပြု၊ စွဲဆောင်မှု အပိုအမို၊ ပေးလှူရတာ ဆယ်ချီ၊ ပင့်ဆောင်ရတာ တ၀ီဝီ၊ ရောက်ရှိလာတာ အချိန်မမှီ၊ ဟောကြားသွားတာ နဝေတိမ်ဆီ။ ခေါ်လိုက်ရတဲ့ သာဓု။ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဘာမသိ။ သတည်း ပြီးလို့ လိုက်ခါခေါ်။ အော်….. နသာဓု၊ နသာဓု၊ နသာဓု ပါတကား။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 373
ba gyi says: ဗေဒင်မရုံရင်နေ၊မွေးတဲ့ရက်၊ခုနှစ်၊မွေးတဲ့နေရာ၊မွေးစာရင်းတော့သေချာမှတ်၊သေချာသိမ်း၊မဟုတ်လို့ကတော့
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 242
Ko out of... says: မှတ်ပုံတင်ကို မွေးတဲ့ရက်၊ခုနှစ်၊မွေးတဲ့နေရာ လိမ်ပြီးပြောလည်း ရပါတယ်.. မြန်မာပြည်မှာ မွေးတဲ့လူ မဟုတ်တာတောင်မှ မှတ်ပုံတင်ဘယ်နှစ်ခုလိုချင်လဲ..လာခဲ့ အချိန်အခါမရွှေး လုပ်ပေးမယ်တဲ့….
etone says: အဲ့လောက် လွယ်နေပြီလားဟင် … ကျွန်မကတော့ မထင် … ။
သူတို့ ရုံးက နမော်နမဲ့ မိန်းမတွေ … လုပ်လို့ ကျွန်မ မွေးသကရာဇ်မှားတာ .. ပြင်ထားတာကို လက်မှတ်ထိုးပေးပါဆိုတော့ … မှတ်ပုံတင်ပေါ် လက်မှတ်ထိုးတာ ထုံးစံမဟုတ်ဘူးတဲ့လေ .. ဒါနဲ့ .. ရပါတယ်ဆိုပြီး ပြန်ပေးလိုက်လို့ ယူလာတာ …ပါစ်ပို့စ်လုပ်တော့ အရစ်ခံရရော .. ရုံးကို ပြန်သွားဖိုင်တွေ ပြန်ရှာ ထောက်ခံချက်ပြန်ယူနဲ့ … ပိုက်ဆံလည်း အတော်ထွက် အလုပ်လည်း အရမ်းရှုပ်သွားတယ် … ။ ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ လောက်သာ သိပြီး နမော်နမဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ဆုပေး ဒဏ်ပေးစနစ်သုံးပြီး ၊ ဒဏ်ရိုက်သင့်တယ် … ။ အဲ့ဒီတုန်းက မှတ်ပုံတင် အသစ်လဲလှယ်ရမယ်ဆိုလို့ .. လုပ်ထားပြီး ကျွန်မကို ဟိုချိန် ဒီချိန် သုံးခါလောက်ချိန်းတာ … ကျွန်မလည်း သွားမယူတော့ဘူး .. လုပ်ပြီးသား အသစ်လည်း လှည့်တောင် မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး.. ဟိဟိ :P အခုလက်တလောထိ အဟောင်းလေးပဲ သုံးနေစဲပါ … :P
bluerose says: တိုတိုလေးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပညာပေးနိုင်ပါတယ်